चार वर्षमा चौवालिस सय मेगावाट बिजुली आउँदै::त्रिशुलीखवर
चार वर्षमा चौवालिस सय मेगावाट बिजुली आउँदै
अहिलेको उत्पादन ९७२ मेगावाट, तीन वर्षमा कुन कुन आयोजना सम्पन्न हुन्छन् ? ( विवरण सहित)
काठमाडौं, मंसिर १९ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल जडित क्षमता ९७२ मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणले ४७७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले थर्मल पावर प्लान्टमार्फत ५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट ४४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । भारतबाट प्राधिकरणले ३११ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको विद्युत् उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले बताएको खवर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
केही समयअघि मात्रै बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी)ले पाँच वर्षभित्र १००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ चीनका तीनवटा प्रतिष्ठित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग लगानीको साझेदारी गरेको छ । दुई खर्बको लगानी साझेदारी गर्दै कम्पनीले यस्तो महŒवाकांक्षी आयोजना निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ ।
यसका लागि बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीले नयाँ कम्पनी एसटिआइभी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट प्रालि दर्तासमेत गरिसकेका छन् । उक्त कम्पनीले पहिलो प्रोजेक्टका रूपमा १०० मेगावाटको तल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ ।
अहिले निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका र उत्पादन गरिरहेका आयोजनाको क्षमता हेर्ने हो भने सरकारी र निजी क्षेत्र लगभग हाराहारी हैसियतमा पुगेका छन् । अझ दुईदेखि तीन वर्षपछि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने देखिन्छ । चार वर्षपछि आउने सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित ९रन अफ दी रिभर० ढाँचाका छन् ।
यसअघि एक वर्षअघिसम्म सरकारले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनाको निर्माण धिमा गतिमा भइरहेको समयमा निजी क्षेत्रले केही गति लिएको छ । निजी क्षेत्रले पनि एक–दुईदेखि १० मेगावाटबाट आफ्नो क्षमता बढाएर एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न थालेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बर्सेनि बढेसँगै लगानीकर्तामा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने हिम्मत बढेर आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ ९इपान०का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।
तुलनात्मक रूपमा निजी क्षेत्रलाई लगानीको समस्या भए पनि खरिद ऐनले केही सहज पारिदिएको उनको तर्क छ । तर, लगानीको सुनिश्चितता भएर पनि सरकारी तबरबाट जुन रूपमा आयोजना अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढ्न नसकेको उनले बताए । अन्य आयोजनाको तुलनामा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनाले भने एकाध वर्षमा नै उल्लेख्य सफलता हासिल गरिरहेको उनको दाबी छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई वन, वातावरण, जग्गा प्राप्तिलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीलाई जति पनि सुविधा नदिएको उनले बताएका छन् । त्यसका बाबजुद पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई फाइनान्सियल टुलको प्रयोग गरी आयोजना अगाडि बढाउन सहज बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए । ‘राज्यले नै निजी क्षेत्रलाई विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको छ,’ गुरागार्इंले भने, ‘अब निजी क्षेत्र पनि पाँच सयदेखि हजार मेगावाटसम्मका ठूला आयोजनाको निर्माण गर्न र आफैँ वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन्, मात्र सरकारी नीति सहज हुनुपर्‍यो ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल जडित क्षमता ९७२ मेगावाट पुगेको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४७७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले थर्मल पावर प्लान्टमार्फत ५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रवाट ४४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
भारतवाट प्राधिकरणले ३११ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको विद्युत् उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले जानकारी दिए । अहिले हिउँदको मौसममा करिब १२ सय ६० मेगावाट विद्युत्को माग रहेको छ भने आगामी बर्ष थप १० प्रतिशत माग बढ्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै आगामी ३ बर्षभित्र बिजुलीको माग बढेर १६ सय मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान रहेको छ ।
तीन वर्षमा कुन कुन आयोजना सम्पन्न हुन्छन् ?
त्यस्तै दुई वर्ष भित्रमा विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेड अन्तर्गतको १११ मेगावाटको रसुवागढी, १५ मेगावाटको सान्जेन, ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजना सम्पन्न हुँदैछन् । यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले आफनो लगानीमा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना आउँदो ६ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुनेछ ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक
– कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेर ऊर्जा क्षेत्रका समस्यालाई समयमा नै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले अहिले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनाले आगामी २ वर्षपछि आन्तरिक माग धान्न सक्छ । त्यसपछि विद्युतको खपत धेरै गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन र ग्रामीण विद्युत्ीकरणमा सरोकारवालाले जोड दिनुपर्छ । अहिलेदेखि नै योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई धेरै पेलियो
– शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ ९इपान०
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेलानमा पारेको छ । विदेशी कम्पनीलाई मात्र वन, वातावरण तथा ऋण लगानीको क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई अवरोध भइरहेको छ । साँच्चै देशमा विद्युत्को नयाँ युगको सुरुवात गर्न खोजेको हो भने निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लाग्नुको विकल्प छैन । निजी क्षेत्रले सरकारी कम्पनीभन्दा चाँडो र किफायती ढंगबाट काम गर्न सक्छ ।